« Sarobidy ny aina, ka atao izay rehetra azo atao mba tsy hisy aina hafoy », hoy hatrany Pastora Dr Rakotonirina David. Izay no ezaka lehibe tsy maintsy atao. « Ny Fiangonana dia mpandray anjara mavitrika amin’izany fiarovana ny aina izany, hoy izy, ary tomponandraikitra voalohany amin’ny fandalana ny aina ».
Miantso ny vahoaka Malagasy, indrindra ny Kristiana, ny FFKM, « mba ajanona mandritra ny fotoana voafetra araka izay handinihana ity valanaretina ity, ny fivoriana samihafa, na komity na fiaraha-mivavaka, na fivoriam-piangonana ».
« Tsy mankany ampiangonana aloha isika fa misoroka ny valanaretina. Any an-tokantrano tsirairay isika no mivavaka. Aleo aloha sakanantsika mba tsy hitombo ity coronavirus ity, satria efa namono olona maro tamin’ny firenena maro, enga anie mba tsy hamono Malagasy».
Nanentana ny Malagasy rehetra ny FFKM hanaraka tsy tapaka ireo vaovao sy vavaka ary Tenin'Andriamanitra ampitaina amin'ny fitaovan-tserasera samihafa.